आन्दोलनकारीको द'वाव थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा अ'कस्मात राजीनामा ! - Rising Dainik
January 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on आन्दोलनकारीको द’वाव थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीद्वारा अ’कस्मात राजीनामा !
काठमाडौँ / मंगोलियाका प्रधानमन्त्री खुरेल्सुख उख्नाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । एक सुत्केरी र उनको शिशुको उपचारमा ला’पर्वाही भएको भन्दै आन्दोलन भएपछि उनले बिहीबार राजीनामा दिनुपरेको हो ।
उनको राजीनामा बिहीबार बेलुका नै संसदले पारित गरेको छ । संसदमा रहेका ७६ सांसद मध्ये ९५ प्रतिशतले उनको राजीनामाको पक्षमा मतदान गरेका थिए । कोरोनाभाइरस आफ्नो देशमा भित्रिन नदिन मङ्गोलियाले गत बर्षदेखि नै नाकाबन्दीलगायतका उच्च सतर्कताका उपायहरु अपनाएको थियो । त्यसबीचमा पनि गत नोभेम्बरमा पहिलो आन्तरिक सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
त्यसपछि फेरि प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरुलाई थप कडा बनाइएको थियो । कडाइ गर्दा गर्दै पनि एउटा अस्पतालमा नवजात शिशुलाई भर्खरै जन्माएकी महिला र ती शिशुसँग कोरोनाभाइरसबाट स’ङ्क्रमितलाई राखेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सर्वत्र वि’रोध भएको थियो ।
वि’रोधसँगै आन्दोलन भएपछि गल्ती भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट प्रहरी अधिकारीहरुले माफी माग्दा पनि आन्दोलन झन झन चर्किदै गएको थियो । आन्दोलनकारीहरुले सरकारी कार्यालयहरु अगाडि वि’रोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
सरकारी अधिकारीहरुले गम्भीर कमी कमजोरी र लापर्वाही गरेको आन्दोलनकारीहरुको आरोप छ । आन्दोलन चर्किदै गएपछि प्रधानमन्त्री उख्नाले पनि दुःख व्यक्त गर्दै क्षमा याचना गर्नु भएको छ । उनले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री भएकाले यो घ’टनाको जिम्मेवारी मैले लिन्छु ।”
“दूर्भाग्यवस ती आमा र शिशुलाई व्यवस्थापनमा केही कमजोरी भएकै हो, त्यो दृश्य हृ’दयविधारक नै छ, त्यसमा सरकारको तर्फबाट गल्ती महसुस गर्दै क्षमा याचना गर्न चाहन्छौँ,” उनले थपेका छन् ।उनका वि’रुद्धमा बुधबार पाँच हजार युवा प्रदर्शनकारीहरुले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले प्रदर्शन गरेको व्यानरमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिएको थियो ।
राष्ट्रिय विपद् आयोगको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री र विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीले भने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भएकाले आन्दोलनकारीको दवावकै कारण यसअघिनै राजीनामा दिइसेकेका थिए ।त्यसैगरी ला’पर्वाही भएको अस्पतालका प्रमुखलगायत अस्पतालका अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
झण्डै एक दशक लामो कम्युनिष्ट नेताहरुको शासनपछि स’ङ्क्रमणमा फसेको मध्य एसियाली लोकतान्त्रीक मुलुक मंगोलियामा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेको छैन ।
ओलीले आयोगमा यसरी पुराउदै छन् बहुमत, पुर्व-एमाले एक बनाउने अध्यादेश ल्याउदै !
सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरे संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस अब येस्तो सम्म हुन् सक्ने
January 31, 2021 January 31, 2021 Ramash Kunwar